झापाको दमकमा संचालित खोप केन्द्रमा अत्याधिक भिडभाड : कोरोनाको महामारी फैलिने त्रास ( तस्बिरहरु सहित ) - Kanchan Post
प्रकाशित समय: १८:४३:१९
दमक : कोरोना संक्रमण तिब्र गतिमा बढेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यलय झापाले कडा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । तर कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यलयले गरेको निर्णय दमक नगरका खोप केन्द्रमा कार्यन्वयन नभएको पाइएको छ ।
दमक नगर पालिकामा आज कोरोना कॉभिड १९ बिरुद्दको खोप सञ्चालन गरिएको हो । ईलाका प्रहरी कार्यालय दमक झापा र पशुपति मन्दिरको प्राङ्गण दमकमा उक्त खोप अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।उक्त खोप सञ्चालन स्थल सानो तथा खोप सेवा लिनेको संख्या बढि भएका कारण खोप स्थल अत्यन्त अब्यवस्थित तथा भिडभाड र खचाखच भएको थियो।
” यस्तो तातोघाममा बीच सडकमा लाईन लगाएर यस्तो अव्यवस्थित बनाउनु भन्दा कुनै फराक र ठूलो चौरमा खोप केन्द्र बनाउँदा उपयुक्त हुने थियो। ” एकजना बृद्द ब्यवसायीले आकोशीत हुँदै बताए । त्यत्रा विद्यालयका खुल्ला चौरहरु त्यसै खाली बसिरहेका छन यो साँघुरो ठाउँमा के गरेको होला ? कमसेकम स्थानिय निकायहरुले पनि ध्यान पुयाउनुपर्ने हो नि हामी जनतालाई चाहिँ जहिले पनि सास्ती मात्र हुने हो ।”
नेकपा माओवादी केन्द्र दमक नगर इन्चार्ज बेदु गौतमले खोपकेन्द्रहरु अव्यवस्थित भएको र यस नगरपालिकाले गैरजिम्मेवार भएको बताए । दमकमा कोरोना विरुद्धका खोप केन्द्र नै कोरोना संक्रमणको ठुलो श्रोत भएको भन्दै यसले आगामी दिनमा यसले दमक नगरपालिकामा कोरोना संक्रमण दर बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । लक्षित समुहलाइ पनि विभिन्न ठाउँमा बिकेन्द्रित गरेर ४- ५ केन्द्रमा संचालन गरिएको भए जोखिम कम हुने उनले बताए ।
दमक उधोग बाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकुल श्रेष्ठका अनुसार नगरपालिकाले ब्यवसायीहरुका लागि २०० डोज खोप मात्र छुट्याइएको र धेरै ब्यवसायीहरु खोप लगाउन आएको कारण भिडभाड भएको बताए । उनले तरकारी पसल , दूध डेरि पसल लगायतका अत्यावश्यक पसलका ब्यवसायीलाई आज खोप दिइएको बताए । अन्य ब्यवसायीहरुले स्पष्ट सुचना नबुझेको कारणले नि फर्किनु परेको जनाए । आगामी दिनमा सबै ब्यवसायिलाई खोप लगाउनका लागि आफुले पहल गरिरहेको बताए ।
कोरोना संक्रमणलाइ न्यूनीकरण गर्न जारि गरिएको निषेधाज्ञा र खोप केन्द्रमा खोप सेवा लिन लामबद्द भएका सेवाग्राहिहरुको लाईन हेर्दा लाग्थ्यो यहाँ कोरोना निवारणका लागी खोप अभियान सञ्चालन गरिदैछ कि कोरोना प्रशारण भईरहेको छ ? आगामी दिनमा खोप सञ्चालन गर्दा थप व्यवस्थित बनाउन ध्यान दिन जरुरी रहेको छ नभए झन संक्रमण तिब्र गतिमा नबढ्ला भन्न सकिन्न ।